Garee Komishiiniin Araara Biyyaalessaa Itoophiyaa muxannoo fudhachuuf Keeniyaa galan - BBC News Afaan Oromoo
Garee Komishiiniin Araara Biyyaalessaa Itoophiyaa muxannoo fudhachuuf Keeniyaa galan
Image copyright Ethiopian Embassy in Kenya
Miseensoonni garee Komishinii Araara Biyyaaleessaa Itoophiyaa miseensoota 11 qabu muxannoo fudhachuuf kaleessa Keeniyaa Naayiroobii galuusaanii Keeniyaatti Ambaasaadarri Itoophiyaa Mallas Alam beeksisan.
Ambaasaadarichi akka jedhanitti jilli kun har'a Kibxataa kaasee hanga Sanbataatti jijjirraa muxannoo adda addaa taasisuun Keeniyaa keessa tura.
Miseensoonni komishinichaas hojiiwwan Komishinii Barbaacha Haqaafi Araaraa Keniyaafi Afriikaa Kibbaatti gaggeefaman irraa muxannoo ni fudhatu jedhameera.
''Komishiniin Araaraa biyya ijaara''
Imbaasiichis jijjirraa muxannoo kana kan qopheesse dhaabbata miti-motummaa teessoon isaa biyya Ingiliz ta'e 'Conciliation Resources' jedhamu waliin ta'uu barameera.
Ambaasadar Mallas sababii jijjirraa muxannoo kana qopheessaniif BBC'tti yoo himan, gahee ibaasiiwwanii keessaa tokko jijjirama beekumsaafi ogummaa taasisuudha jedhanii, komishiiniin araaraa sadarkaa biyyaatti yoo hundeeffamu kan jalqabaa waan ta'eef, miseensooonnif dameewwan oggummaa garaa garaa irraa kan babahan waan ta'aniif muxannoo biyyoota biraa argachuun hojiisaanii haalaan gaggeessuuf ni gargaara jedhaniiru.
Miseensoonni komishinichaa Itoophiyaa keessatti nageenyi akka dhufuuf barbaadan illeen muxannoo biyyota biraa argachuunsaanii ammoo hojiisaaniif ni gumaacha jedhaniiru.
Muuxannoo biyyoota rakkinni isaan mudatee ture kan biyya keenyaatiin walfakkaatu argachuun ammoo hojji miseensota komishinichaa gara fuuladuraa ni salphisaaf kan jedhan Ambaasaadar Mallas, Keeniyaan bara 2007'tti rakkinni walfakkaataan mudatee waan tureef miseensoonni komishinichaa kanuma ilaaluuf dhufan jedhaniiru.
Miseensoonni kunnneenis turtii isaanii Naayirobitiin Komishinii Haqa Barbaachaafi Aaraaraa biyyattiifi Walta'insa biyyaalessaatiin leenjiin akka kennamuuf barameera. Keeniyaan alattis gareen Afriikaa Kibbaatii dhufaniinis leenjiin akka kennamuuf baruun danda'ameera.
Akkasumas, miseensoonni kunneen turtiisaanii Keeniyaatiin qondaaltoota motummaa adda addaa waliin wal arganii marii akka taasisan eegama